October 25, 2009 at 6:31 pm 10 comments	ဒေါ်ခင်လေးမြင့်(၁၉၃၉-၂၀၀၇) နဲ့ တွေ့ ရတော့ မရွှေမိ တော်တော်ကို ၀မ်းသာမိတယ်။ စိတ်ထဲက လဲ သူလို ဒေါက်တာဘွဲ့ ရ လူကြီး တစ်ယောက်က ကိုယ်လို မလောက်လေးမလောက်စားကို အချိန်ပေးတွေ့ တာကိုကျေးဇူးတွေတင်လို့ ပေါ့။ နောက်ပိုင်းမှာ တော့ တကယ်လဲ ဆရာမကြီး က သူ့အချိန်ကို တော်တော်တန်ဖိုးထားပြီးသုံးတာပါ။ ပြင်သစ်စာသင်တဲ့ ၀ိုင်းတွေကပြည့်နေပြီး သူက နာရီနဲ့ တွက် ပိုက်ဆံယူတာဆိုတော့ တစ်နာရီဆိုလဲ တစ်နာရီက ပိုက်ဆံဝင်နေတာကိုး။
ပြောဖြစ်တာကတော့ ပြင်သစ်စာအကြောင်း၊ပြင်သစ်မှာနေတုန်းကအကြောင်း၊ ပြင်သစ်စာသင်တဲ့အတွေ့အကြုံ တွေအကြောင်း …ဂျာနယ်ကျော်မမလေး အကြောင်း က မပါသလောက်ပဲ။ မေမေဆုံးသွားပြီး အိမ်တွေအပြောင်းအရွှေ့ နဲ့ ဆိုတော့ စာအုပ်တွေ က မရှိတော့တာများတယ်။ ဘာမှမသိမ်းထားဖြစ် ဘူးဆိုတာ လေးပဲ ပါတယ်။😦
ဒါနဲ့ တခါတည်း ကျောင်းအပ်ခဲ့ရောဆိုပါတော့😛 အဲဒီအချိန် ၁၉၉၉-၂၀၀၀ လောက်မှာ တစ်နာရီ ၅၀၀ နှုန်းယူပါတယ်။ ၂ နာရီဆိုတော့ တစ်ထောင်ပေါ့။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ်။ တစ်ယောက်ထဲသင်ရတယ်။ နောက်ပိုင်း ပြင်သစ်သံရုံးမှာ ကျောင်းတက်တော့မှ အဲဒီက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စုသင်တယ်။ အဲဒါလဲ တယောက်တော့ ၅၀၀ ပါပဲ။ ဆရာမ ကတော့ သိပ်မပင်ပန်းတော့ဖူးပေါ့။
Entry filed under: ဂျာနယ်ကျော်မမလေး, စကားစမြည်. Tags: .	ဂျာနယ်ကျော်မမလေး …မေတ္တာပန်းပွင့် …အစ်မကြီးဂျာနေဂျို..ပန်ချာပီမိန်းမချောနဲ့ တူတဲ့စာရေးဆရာမ (အပိုင်း ၂ )	Non, Je ne Regrette Rien	10 Comments Add your own
yuki | October 5, 2010 at 10:33 pm
khineshwewa | June 17, 2010 at 5:55 am
mashwemi | June 17, 2010 at 11:03 am
Thank you very much for your comment. I love to know more about DKLM.🙂 In my opinion, wherever she lived or which kind of life style she headed (good one or modest one), she always seemed satisfied with her current situations despite ups and downs in her life. I don’t know much about her. All I wrote are from the perspective of her student, so those are very superficial ones.If you read the article written by her brother U Moe Hein about her death, I believe we could understand more about her😦 As far as I could feel,her sunset days were kind ofasad story. But I am sure she leaded her life inapeaceful way till her death. RIP ,sayarma gyi. Reply	4.
သဒ္ဓါလှိုင်း | June 16, 2010 at 1:10 pm
mashwemi | June 16, 2010 at 2:29 pm
DD | June 10, 2010 at 3:51 pm
မေဓာဝီ | April 22, 2010 at 3:02 pm
Thet Oo | April 21, 2010 at 4:28 pm
ShwunMi | October 26, 2009 at 12:43 am
mashwemi | October 26, 2009 at 12:49 am
ဒီလို စိတ်ဝင်တစားဖတ်ပြီး ကွန်မင့်ရေးခဲ့တာ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် . ..🙂 နောက်လဲလာလည်ပါ နော်။